प्रथम जीपी मेमोरियल गोल्डकप सम्पन्न – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
प्रथम जीपी मेमोरियल गोल्डकप सम्पन्न
प्रतियोगिताको उपाधी वडा नं ४ ले चुम्यो
२०७६, १२ पुष शनिबार २१:३९
धनकुटा पुस १२ । पाख्रिवासमा आयोजित वडास्तरीय प्रथम गिरिजाप्रसाद (जीपी) कोईराला मेमोरियल गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको उपाधी पाख्रिवास वडा नं ४ ले चुमेको छ । जाल्पादेवी खेलमैदानमा सम्पन्न फाईनल खेलमा दुवै टिमले निर्धारित समयमा कुनै गोल गर्न नसकेपछि खेल ट्राईब्रेकबाट निर्णय भएको हो ।
ट्राईब्रेकर पेलान्टीसुटआउटमा वडा ४ ले वडा नं ३ लाई ३ का विरुद्ध ४ गोल गरी उपाधी जित्न सफल भएको हो । प्रतियोगितामा वडा नं. ४ को १ गोल वडा ३ का गोलरक्षकले रोकेर ४ गोल गरेका थिए । अर्कोतिर वटा नं. ३ का २ खेलाडीले पेलान्टी गोल पोल बाहिर गएकोले ३ गोलमा सीमित हुन गयो ।
प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेता वडाले क्रमशः नगद ५१ हजार र नगद २५ हजारसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए । फाईनल प्रतियोगिताका म्यान अफ दि म्याच वडा ४ का गोल रक्षक धनबहादुर मगर भए । विजेता तथा उपविजेता वडाहरुलाई प्रमुख अतिथि नेपाली कंग्रेसका नेता तथा जीपी फाउण्डेशनका केन्द्रिय सदस्य डा. शोभाकर पराजुली, १ नं. प्रदेशका अध्यक्ष इन्दिरा थापा, पाख्रिवास नगर अध्यक्ष जयन्द्र घिसिङले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
सो अवसरमा प्रमुख अतिथि पराजुलीले राजनेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोईराला लोकतन्त्र र विकासका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्नु भएको जानकारी गराए । उनले लोकतन्त्र र खेल दुवैमा अनुशासन र निरन्तरता आवश्यक हुने बताए ।
सो अवसरमा पराजुलीले धनकुटा फुटवलका लागि उर्वर भूमि रहेको बताए । उनले धनकुटाका किरण चेम्जोङ र सुजल श्रेष्ठ जस्तो यस क्षेत्रका खेलाडिहरु पनि राष्ट्रिंय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न सक्ने भएकाले अनुशासित र निरन्तर रुपमा खेलको अध्यास गर्न सुझाव दिए । उनले खेलले मानिसलाई स्वस्थ्य र अनुशासित बनाउने भन्दै अहिले देशमा अनुशासनहिन बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तै फाउण्डेशन प्रदेश अध्यक्ष थापाले फाउण्डेसनले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्तरीय फुटवल उत्पादन गर्न र खेलको विकास गर्न पाख्रिवासमा प्रतियोगिता आयोजना गरेको बताईन । उनले प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी आगामी वर्षमा बढाउने प्रतिवद्धता जनाईन । सो अवसरमा अध्यक्ष थापाले फाउण्डेशनले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिलालगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी गराईन । उनले धनकुटाका दुई जना विद्यार्थीलाई एडभान्स स्वास्थ्य तालिमका लागि चीनमा पठाएको जानकारी गराईन । उनले प्रतियोगितामा राम्रो खेल प्रदर्शन गरेका पाख्रिवास वडा १० का खेलाडी उज्वल भण्डारीलाई वार्षिक २५ हजार रुपैया प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्ने घोषणा समेत गरिन् ।
प्रतियोगिता फउण्डेसन पाख्रिवास नगर समितिका अध्यक्ष घिसिङको अध्यक्षतामा भएको थियो । प्रतियोगिता समापन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी तथा लेखक चन्द्रकिशोर झा, मुस्लिम संघ उदयपुरका अध्यक्ष नजवुल खान, वडाध्यक्षहरुको तर्फवाट ४ नं. वडाध्यक्ष सोवित निरौलालगायतकाले मन्तव्य राखेका थिए । फाउण्डेसनका सल्लाहकार ज्ञानबहादुर गुरुङले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन प्रेम भण्डारीले गरेका थिए ।
प्रतियोगिता मंसिर १० गतेदेखि शुरु भएको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन १ नं. प्रदेशका प्रथम प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले गरेका थिए ।
धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघमा तालाबन्दी
राष्ट्रिंय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दिवस मनाईयो